भारतः मुसाकै कारण बाढी आएको मन्त्रीको दाबी ! - Samudrapari.com
भारतः मुसाकै कारण बाढी आएको मन्त्रीको दाबी !
७५० पटक हेरिएको
काठमाडौं – नेपालमा हालै तराई क्षेत्रमा भएको बाढी तथा डुबानको लागि भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ । बाढीले नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि असर गरेको छ । र, भारतमा चाहीँ उक्त बाढीको लागि मुसालाई जिम्मेवार ठहराइएको छ ।
भारतको बिहार राज्यका जल संसाधन मन्त्री राजीव रन्जनले राज्यमा आएको बाढीका लागि मुसा जिम्मेवार रहेको बताएका हुन् । बिहारमा हालैको बाढीबाट ५ सय भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् र एक करोड भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका छन् ।
मन्त्री रन्जनका अनुसार बाढी रोक्नका लागि जो तढबन्ध बनाइएको थियो ती तटबन्धमा मुसाले भ्वाङ पारेका कारण तटबन्ध कमजोर बन्दा बाढीले क्षति पर्‍याएको हो । तर जनताहरुले भने सरकारले सडक तथा अन्य संरचना बनाउँदा पानीको निकासलाई ध्यान नदिएका कारण बाढीको समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।
स्मरण रहोस् बिहारमा कुनै समस्याका लागि मुसालाई जिम्मेवार मानिएको यो पहिलो घटना होइन । यहीँ वर्ष सरकारी अधिकारीहरुले जफत गरेको हजारौँ लिटर रक्सी एकाएक गायब हुनुमा पनि मुसाकै दोष देखाइएको थियो ।
प्रतिबन्धित रक्सी मुसाले नै पिएर रित्याएको दाबी अधिकारीहरुले गरेका थिए । –बीबीसी
भेटियो बरफको विशाल चक्र, के छ रहस्य ?
निद्रा लाग्दैन ? यसो गर्नुस्
यस्तो कार, जसलाई ट्राफिक जामले रोक्दैन
चिसो फाल्ने खसीको खुट्टाको सुप यसरी बनाउनुहोस, केही टिप्स
आफ्नो क्षेप्यास्त्र आफ्नै शहरमा खस्दा…
अनुहार चम्किलो र मुलायम बनाउनका लागि केही घरेलु उपाय
यस्तो ठाउँ, जहाँ मृत्युसँग खेल्न जान्छन् मान्छेहरु
व्यक्तित्व विकासका ७ आइडिया
सेक्सले पनि शरीर सुन्दर बनाउँछ ! कपाल समेत सुन्दर र चम्किलो
अनौठो विश्वविद्यालय, जहाँ अब विद्यार्थी बनाउनेछन् प्रश्नपत्र